Izinhlangano Ezigugile eCarlifonia naseCAF Shelf Companies Inventory
Izinhlangano ezigugile yizinkampani ezifakwe ne-ejensi kahulumeni ngaphambi kokuba ithengwe. Akukaze kwenziwe ibhizinisi. Izinkampani Ezihlanganisiwe zigcina uhlu lwezinkampani eziningi ezindala nezamashalofu eCalifornia.
Izinkampani eziningi zinama-akhawunti asebhange asebekhulile futhi, ngokuya ngokutholakala. Amabhizinisi amadala abizwa nangokuthi “yinkampani yamashalofu”. Futhi kuyatholakala izinkampani ezindala eCalifornia kanye nohlelo lokwakhiwa kwezikweletu oluhlanganisiwe. Sinezinkampani ezindala kwezinye izindawo futhi.
Izinzuzo ze-Aged Corporations eCalifornia
Izikweletu ze-Zero noma Izikweletu
Incwadi yokuqopha yenkampani
Amaminithi kanye namaFomuazisombululo
Izitifiketi Zesitoko (amasheya angenalutho, akhishwe)
Ukuma okuhle lapho uthola inkampani
Imininingwane Engaphezulu Yezinkampani Ezinkulu
Izinkampani ezindala ezinohlelo lokwakhiwa kwezikweletu
Izinhlangano ezigugile nama-akhawunti asebhange
Izinkampani zamashalofu zeNevada
Izinhlangano ezisheshayo ezisebenzayo
Izinhlangano Ezigugile ezinamaphuzu wePaydex asunguliwe
Izinkampani Ezihlanganiswe nazo zingafaka ifayili lesitifiketi sakwamanye amazwe ukuze ukwazi ukusebenzisa inkampani yakho ukwenza ibhizinisi kwesinye isimo, isifundazwe noma izwe. Uma ufuna inkampani yamashalofu engasogwini lolwandle, kukhona okuningi okutholakalayo.
Izici ze-Aged Corporations eCalifornia
Umlando webhizinisi - Sungula umlando osheshayo webhizinisi lakho
Isithombe sebhizinisi - Ukuthenjwa kwamakhasimende nababolekisi kungenzeka, ngombono wethu, kuthuthukiswe nenkampani endala
Ikhredithi Yokwakha - Inkampani yamashalofu ingahlanganiswa nebhizinisi elivele ikhona futhi ingathuthukisa kakhulu inqubo yokwakhiwa kwesikweletu sebhizinisi. (Ngokwemvelo, kunezinye izici ngaphezu kweminyaka.)
Ukubolekwa Kwebhange - Amabhange kungenzeka aboleke inkampani yakho uma inomlando webhizinisi, ikakhulukazi uma iminyaka yenkampani ihambelana nenombolo yeminyaka empeleni obesebhizinisini. Ngokwemvelo, lo umbono wethu kuphela futhi azikho iziqinisekiso.
Izinkontileka - Amabhidi ezinkontilekeni ezithile kwezinye izimo kungenzeka adinge inkampani ibe yiminyaka yobudala engezansi (lokhu kungenzeka kwezinye, kepha hhayi kuzo zonke, izimo).
Ukuthenga ngesikweletu - Izinhlelo zokwakhiwa kwezikweletu nezinhlangano zezimali zebhizinisi ziyatholakala
Ukuqalisa Okusheshayo - Ibhizinisi lakho lifakiwe futhi lilungele ukulethwa ngokushesha
Thola Amakhasimende - Ubudala bebhizinisi bukhulisa ukuzethemba kwamakhasimende, ikakhulukazi uma luhambisana nenani leminyaka obukwibhizinisi ngalo empeleni.
Imigqa Yezentengiso - Kungaba lula ukuthi inkampani endala ithole isikweletu nabaphakeli
Futhi, sincoma ukudalulwa okugcwele nababolekisi, amakhasimende nabanye. Izinzuzo ezingenhla zincike embonweni wethu futhi zingahle noma zingasebenzi ezimeni zakho ezithile. Ukhuthazekile ukuthi ufune izeluleko zomthetho kummeli onelayisense kanye nezeluleko zentela ezivela kumgcini zimali onelayisensi.
Ngibhekabheka Izinkampani Ze-Shelf Nezinkampani e-California